Dalka Mozambique: Araday lagu waraabiyay kaadi iyo Saxaro – SHABAKADA HIIRAAN XOG
HomeWararka SoomaaliaDalka Mozambique: Araday lagu waraabiyay kaadi iyo Saxaro
Dalka Mozambique: Araday lagu waraabiyay kaadi iyo Saxaro
Hiiraan Xog, Apr 20, 2018:- Xaflad ay qabteen Ardayda jamaaadda dalka Mozambique ayaa sabatay fadeexad, kadib markii sawirraan lagu baahiyay baraha bulshada oo muujinayay arday lagu qasbayay in ay cabaan oo ay ku qabaystaan kaadi iyo saxaro.
Qaar ka mid ah ardayda jaamacadda Unizambeze ayaa iska xiiray tinta. Sida laga soo xigtay warbaahinta qaaska loo leeyahay ee STV, xaflad dhaqameedkaan ayaa dhacday dhowr maalmood ka hor.
Mid ka mid ah ardayda la cabsiiyay kaadida oo lagu magacaabo Artemiza Nhantumbo, ayaa warbaahinta la wadaadgatay qaabka ay wax u dheceen.
Dadka xafladda qabanayay ayaa naga jaray timaha. Waxa ay ahayd mid xabsi ah oo aan la aqabali Karin.waxa ay nagu qasbeen in aan cabno kaadida iyo saxarada bini’aadanka. Waxa ay na cabsiiyeen kaadi, sidoo kalana waxa ay wajiyadeena ku dhoobeen saxaro.
Sababta ay timaha nooga xiireen waxay ahayd timaha yaga ayaa aad u dheedheeraa, balse ma jirin wax aan samayn karnay. Waan ooyay oo aan ooyay ilaa aan ka tago guriga.
Waalidiinta dhalay ardayda ayaan ku farxin dhacdadaan,waxa ayna maamulka ka codsadeen in ay tallaabo sharciga waafaqasan ka qaadaan dambiileyaasha.
Cardoso Miguel, oo ka tirsan wasaaradda waxbarashada ayaa sheegay in haatan baarintaano ay socdaan.
Dhaqankan oo loo qabto ardayda ku cusub jaamacadda ayaanan si rasmi ah loo joojin balse waa dhaqan inta badan laga sameeyo jaamacadaha waddanka, kuwaasi oo ay inta badan soo abaabulaan ardayda dhigata sanadka labaad ee jaamacadda.
Tabaraha Kooxda Arsenal oo shaqada ka tagidoono dhamaadka xili ciyaaredkan
Maxkamadda Racfaanka dalka Kenya oo laashay Doorashada barasaabka Wajeer